AKHRISO: Sacuudi Careebiya markii ugu horeysay ayay si toos ah uga hadleen Dilka Wariye Jamaal, Maxayse dhaheen? – Puntlandtimes
October 13, 2018 W LAASCAANO
Sacuudi carabiya oo eedda ku saabsan dilka wariye Jamal Kashoggi ee la sheegay in lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku tilmaantay ‘been abuur aan sal iyo baar toona lahayn’.
Wasiirka arrimaha gudaha Sacuudi Carabiya Amiir Cabdulcaziz bin Sacuud Bin Salmaan diidmada waddankiisa ayaa waxay timid 11 maalmood kaddib marki Mr Khashoggi ay aragtidiisa ugu dambeysay isaga oo sii galaya qunsuliyadda.
Wrarka ka imanaya laamaha ammaanka ee Turkiga ayaa waxay sheegayaan iney koox sirdoonka Sacuudiga ka mid ah ay dileen wariye Khashoggi.
Laanta Sirdoonka Turkiga oo BBC la hadashay ayaa waxay sheegtay iney hayaan caddeeymo maqal iyo muuqaal ah oo muujinaya dilka Khashoggi loo geystay.
Sacuudi Carabiya ayaa waxay wariyahan la la’yahay u yaqaannaan inuu yahay nin si weyn u cambaareeya siyaasadda Sacuudiga isaga oo waddanka Sacuudiga isaga tagay oo mudda sanad ahna ku noolaa dalkaasi Mareykanka.
Wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga waxay maanta oo Sabti ah war qoraal ah oo ay soo saartay ay ku sheegtay boqortooyadu iney dooneyso ‘runta oo dhan’ iney soo bandhigto, iyada oo wakaaladda wararka ee sacuudiga ay wax ka qortay “in amar lagu bixiyey dilka wariyaha”, boqortooyadana ay hadalkaasi ku tilmaantay “mid aan waxba ka jirin”.
Lumitaanka Mr Kashoggi iyo wararka ku saabsan dhimashadiisa waxay caalamka ka abuurtay caro aan yareyn.
Xoghayaha guud ee qaramada Midoobay Antonio Gutares ayaa sheegay “in si degdeg ah runta shaaca looga qaado, oo wariyaha mucaaradka ee Sacuudiga u dhashay ee la la’yahay ay ka mid tahay dhacdooyinka bariyahan dambe dunida ku soo badanaya lana caadeystay beesha caalamkana ay u dul qaadaneyn arrimaha noocan ah.”
“Waxaana lagama maarmaan ah ayuu yiri in si degdeg xaqiiqda iyo sida ay wax u dhaceen shaaca looga qado.”
Dhanka kale Madaxweynaha Mareykanka Donald trump oo xiriir aad u adag la leh boqortooyada Sacuudiga ayaa wuxuu ballan qaaday inuu ka shaqeynayo sidi runta loo soo bandhigi lahaa.
Isaga oo intaa ku daray inuu amuurtani uu kala hadli doono Boqor Salmaanka Sacuudiga.
Warbixinta ugu dambeysay uu Turkigu soo saaray ayaa waxay ku saabsan tahay xog laga soo ururriyey qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay Istanbul.
BBC carabi oo soo xigatay qaar ka mid ah Saraakiisha sirdoonka Turkiga ayaa waxay sheegtay iney Turkidu hayaan codad iyo muuqaallo arrintan ku saabsan balse ay xaqiijin karin iney daawadeen ama ay dhageysteen mas’uuliyiinta sare ee Turkiga.
Wargeyska Washington Post iyada oo soo xiganeyso qof goob joog ka ahaa arrinta ayaa waxay qortay inuu ninkaasi dhagahiisa ku maqlay Kashoggi oo la ciqaabayo oo qeylinayo.
Telefishiinnada Turkiga ayaa waxay baahiyeen muuqaal muujinaya Mr Kashoggi oo sii galaya qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul.
Waxayna telefishiinnada baahiyeen mid ka mid ah Sirdoonka Sacuudiga oo soo galaya Turkiga kaddibna ka baxaya. Warbaahinta Turkiga waxay baahiyeen magacda 15 xubnood oo sirdoonka sacuudiga ka tirsan oo looga shaki qabo in waayitaanka Kashoggi ay ku lug leeyihiin.
Sida Maher Mutreb oo ka mid ah sargaal sirdoonka Sacuudiga ka tirsan uu fadhigiisu yahay London iyo mid kale oo takhasuskiisu yahay dambi baadhista.
Maxaa hadda dhacaya?
Saraakiisha Turkiga waayitaanka la waayey Mr Khashoggi waxay ku tilmaameen iney shaki kaga jirin in la dilay laguna dilay Qunsuliyadda Sacuudiga dhexdeeda.
Si kastaba ha ahaatee, xukumadda Ankara waxay oggolaatay iney baaritaan wadajir ah la sameeyaan boqortooyada sacuudiga, waxaana jimcihi Turkiga soo gaadhay koox dambi baadhayaal ah oo ka socda dalka sacuudiga oo la filayo baarittaannada la sameeynayo dabayaaqada toddobaadkan in la sameeyo.
Imaashaha kooxda dambi baadhayaasha ayaa waxay ku soo beegantay xilli uu mas’uul sare oo ka tirsan boqortooyada sacuudi carabiya Amiir Khaled al-Faisal oo booqday Turkiga uu sheegay iney arrintan xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal dal xumeyneyso xal degdeg ah laga gaaro.
Waayitaanka Mr Khashoggi waxay sumcadda ka disahay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Amiir Mohamed bin Salman, iyo xiriirka Sacuudi Carabiya uu la leeyahay waddamada caalamka.